Ukugcina Imiyalo Nokulandela Iqiniso | IVANGELI LOKUFIKA KOMBUSO
Ezenzweni zenu, ukugcina imiyalo kufanele kuhlobane nokulandela iqiniso, Ngesikhathi esifanayo nenigcina ngaso imiyalo, kufanele futhi nenze neqiniso. Lapho nilandela iqiniso, akufanele nephule imiyalo noma nimelane nemiyalo. Yenzani lokho uNkulunkulu adinga ukuthi nikwenze. Ukugcina imiyalo nokulandela iqiniso kuyahambisana, akushayisani. Lapho nilandela iqiniso, yilapho nisigcina khona nakakhulu isiqu semiyalo. Lapho nilandela iqiniso, yilapho nizoliqonda khona nakakhulu izwi likaNkulunkulu elivezwe emiyalweni. Ukulandela iqiniso nokugcina imiyalo akuzona izenzo ezishayisanayo, kodwa izinto ezihlangene. Okokuqala, umuntu angalandela iqiniso kuphela ngemva kokugcina imiyalo bese ezuza ukukhanyiselwa uMoya Oyingcwele. Kodwa lena akuyona inhloso yasekuqaleni kaNkulunkulu. UNkulunkulu ufuna nimkhonze ngenhliziyo, ningagcini nje ngokuziphatha kahle. Kodwa kumele niyigcine imiyalo okungenani ngaphandle nje ngokwezinga elithile. Kancane kancane, ngemva kokubona izinto, umuntu umqonda ngokucacile uNkulunkulu. Uyayeka ukuhlubuka nokumelana noNkulunkulu, uyayeka nokungabaza umsebenzi kaNkulunkulu. Yile ndlela umuntu angagcina ngayo isiqu semiyalo. Ngakho, akusizi ngalutho ukugcina imiyalo uma ningalandeli iqiniso futhi akunenzi nimkhonze ngeqiniso uNkulunkulu ngoba nisuke ningakasizuzi isimo seqiniso. Uma nigcina imiyalo ngaphandle kweqiniso, lokho kungasho ukuthi nigcina ngokunamathela emithethweni. Ngokwenza kanjalo, imiyalo iphenduka imithetho yenu, okuyinto engeke inenze nikhule empilweni. Ngokuphambene nalokho, iyoba umthwalo kini, futhi iyonibopha iniqinise njengomthetho weTestamente Elidala, ixoshe uMoya Oyingcwele kini. Ngakho, ngokugcina imiyalo ngokuphumelelayo kuphela lapho ningenza khona ngokweqiniso. Umuntu ugcina imiyalo ukuze alandele iqiniso. Nilndela iqiniso kakhulu uma nigcina imiyalo. Nize niyiqonde nakakhulu incazelo engokoqobo yemiyalo ngokulandela iqiniso. Inhloso nencazelo yokuthi kubaluleke kuNkulunkulu ukuthi umuntu agcine imiyalo, ukuthi imithetho ingalandelwa ngokucabanga komuntu, kodwa kube mayelana nokungena komuntu empilweni. Lapho nikhula empilweni, liyakhula nezinga enigcina ngalo imiyalo kaNkulunkulu. Nakuba imiyalo yenzelwe ukugcinwa umuntu, isiqu semiyalo siqala ukuba sobala kuphela lapho umuntu eba nesipiliyoni empilweni. Abantu abaningi bacabanga ukuthi ukugcina imiyalo kusho ukuthi “yonke into isilungile, okusele nje ukuthi uzibandakanye.” Lokhu ukucabanga okuyihaba akuyona intando kaNkulunkulu. Labo abasho lezo zinto abafia ukuthuthukisa futhi banomona enyameni. Umbhedo le nto! Le nto ayikhona ukuvumelana nezimo zangempela! Akuyona intando kaNkulunkulu ukwenza iqiniso nje ngaphandle kokugcina imiyalo. Labo abenza lokhu bayizigoga; banjengabantu abangenawo omunye umlenze. Ukugcina imiyalo kuphela nokunamathela ngokuqinile kuyo ngaphandle kokuba neqiniso akuyifezi intando kaNkulunkulu nakho; njengabantu abangenalo elinye iso, abantu abenza lokhu, nabo, banohlobo oluthile lokukhubazeka. Kungashiwo ukuthi uma uyigcina kahle imiyalo futhi umqonda kahle uNkulunkulu ongokoqobo, uyoba neqiniso. Ngokombono othi awufane, uyozuza isimo seqiniso. Wenza ngokweqiniso okufanele ulenze futhi ngesikhathi esifanayo ugcine imiyalo ngaphandle kokukushayisanisa. Ukwenza ngokweqiniso nokugcina imiyalo yizinhlelo ezihlukene kabili, kokubili kuyizingxenye ezibalulekile ekuphileni komuntu. Ulwazi lomuntu kufanele luhlanganise ukugcinwa kwemiyalo ngokwenza ngokweqiniso, hhayi ukwahlukana. Nokho, kulezi zinto ezimbili, kukhona kokubili ukuhlukana nokuhlangana.
Ukulandela iqinisp kuyindlela ukuphila komuntu okungakhula ngayo. Uma ningalenzi iqiniso, niyosala nemfundiso kuphela futhi ngeke nibe nokuphila kwangempela. Iqiniso liwuphawu lwesimo somuntu. Ukuthi uyalenza noma cha iqiniso kuncike ekutheni uyasithola yini isimo sangempela. Uma ungalilandeli iqiniso, ungenzi sengathi ulungile, noma uphambukiswa imizwelo nokunaka inyama, kusho ukuthi usekude nokugcina imiyalo. Lesi isifundo esijulile. Maningi amaqiniso umuntu angangena kuwo futhi awaqonde enkathini ngayinye. Kodwa kunemiyalo ehlukile ephelezela amaqiniso asenkathini ngayinye. Iqiniso elenziwa umuntu lihlobana nenkathi nemiyalo umuntu ayigcinayo nayo ihlobana nenkathi. Inkathi nenkathi inamaqiniso ayo okufanele enziwe nemiyalo okufanele igcinwe. Nokho, ngenxa yemiyalo ehlukahlukene eyamukelwe uNkulunkulu, okusho ukuthi, ngenxa yezinkathi ezihlukahlukene, umgomo nomphumela wokulandela iqiniso kwehluka ngokushiyana. Kungashiwo ukuthi imiyalo isebenzela iqiniso nokuthi iqiniso likhona ukuze kulondolozwe imiyalo. Uma kuneqiniso kuphela, ngeke lube bikho ushintsho esingakhuluma ngalo emsebenzini kaNkulunkulu. Nokho, ngokukhuluma ngemiyalo, umuntu angabona umehluko omkhulu womsebenzi owenziwe uMoya Oyingcwele futhi umuntu angayazi inkathi uNkulunkulu asebenza Kuyo. Enkolweni, baningi abantu abangalandela iqiniso ngokweqiniso kubantu eNkathini Yomthetho. Nokho, abanayo imiyalo yenkathi yomtjhetho futhi abakwazi ukugcina imiyalo yenkathi entsha. Banamathele endleleni endala futhi basafana nabantu basendulo. Abahambisani nendlela entsha yokusebenza futhi abanakuyibona imiyalo yenkathi entsha. Kulabo, awukho umsebenzi kaNkulunkulu. Bafana nomuntu ophethe igobolondo leqanda elingenalutho: Awukho umoya uma lingekho itshwele ngaphakathi. Uma singagwegwesi, akukho ukuphila. Lowo muntu akangenanga enkathini entsha futhi usalele emuva kakhulu. Ngakho, akusizi uma abantu neqiniso lasendulo kodwa ungenayo imiyalo yenkathi entsha. Abaningi benu benza iqiniso langalesi sikhathi kodwa abayigcini imiyalo yangalesi sikhathi. Ngeke nithole lutho, iqiniso nililandelayo ngeke linisize ngalutho futhi uNkulunkulu ngeke alidumise. Iqiniso kumele lilandelwe ngendlela uMoya Oyingcwele osebenza ngayo namuhla; kumele lilandelwe kulandelwa izwi likaNkulunkulu ongokoqobo namuhla. Ngaphandle kwalokhu, konke kuyize—kufana nokuthela amanzi kubhasikidiemhlane wedada. Lena incazelo engokoqobo yokusatshalaliswa kwemiyalo yangenkathi entsha. Uma unokuqonda okunzulu ngomsebenzi kaMoya Oyingcwele wamanje futhi ungena endleleni yomsebenzi wanamuhla, uyosibona ngokwemvelo isiqu sokugcina imiyalo. Uma usuku lufika lapho ubona isiqu semiyalo yenkathi entsha futhi ungakwazi ukugcina imiyalo, khona-ke ngaleso sikhathi uyobe usuphelelisiwe. Lena incazelo yangempela yokulandela iqiniso nokugcina imiyalo. Ukuthi iqiniso uyalenza noma cha, kuncike ekutheni usiqonda kanjani isiqu semiyalo yenkathi entsha. Umsebenzi kaMoya Oyingcwele uzolokhu uvela kumuntu futhi uNkulunkulu uzolokhu efuna okuningi kumuntu. Ngakho, ukulandelwa kweziniso ngabantu kuzodlondlobala kakhulu nemiphumela yokugcina imiyalo izoba mikhulu. Ngakho, kufanele ulandele iqiniso ngokweqiniso uphinde ugcine imiyalo ngesikhathi esisodwa. Akekho okufanele ayishaye indiva le ndaba. Amaqiniso amasha nemiyalo emisha makuqale ngesikhathi esifanayo kule nkathi entsha.
Okwedlule：Gxila Kakhulu Kokungokoqobo